बाढीपिडितको पिडामा कांग्रेस नेता प्रदिप पौडेलको साथ (भिडियो र तस्विर सहित) « Lokpath
२०७४, २१ भाद्र बुधबार १०:४६
बाढीपिडितको पिडामा कांग्रेस नेता प्रदिप पौडेलको साथ (भिडियो र तस्विर सहित)
प्रकाशित मिति : २०७४, २१ भाद्र बुधबार १०:४६
२०७२ सालको विनाशकारी भुकम्प पश्चात पीडित बस्तिमा पुगि उद्दार र राहतमा पहिलो कदम चाल्ने व्यक्ति थिए प्रदिप पौडेल । नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको अग्रभागमा रहदै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय सरदस्य रहेका पौडेलले भुकम्पपछि राहत र पुननिर्माणलाई यतिधेरै तदारुकता दिए कि विभिन्न स्थानमा ७ सय बढी घरटहरा भुकम्प पीडितको लागी निर्माण गरिदिएका थिए । नागरिकलाई परेको विपत्तिमा सधै हातेमालो गर्दै साधानको लागी पहलकदमी लिने पौडेल तराईको विभिन्न भागमा बाढीले जनधनको क्षती गरिरहदा किन मौन बसे भन्ने धेरैमा चासो हुनु स्वभाविक थियो । तराईमा बाढीले ग्रस्त पारिरहदा उनको परिवारमा छोरीको जन्म भएकोले जीवनसंगिनीको स्याहारसुसारमा पौडेलले केहीदिन कतै निस्कन पाएनन् । पाटीको कामको व्यस्तता साथै एक महिनापनि नपुगेकी सुत्केरी जीवनसंगिनीको हेरचाहलाई व्यवस्थापन गर्दै यतिबेला प्रदिप पौडेल तराई झरेका छन् ।
हेर्नुस भिडियो अहिले सम्म राज्य नपुुगेको गाउँमा पुुगेर प्रदिप पौडेलले के भने
नेपाली जनसम्पर्क समिति साउदी अरबका संरक्षक पुरुषोत्तम खनाल र वरिष्ठ उपसभापति अर्जुन थापाको साथमा सप्तरी पुगेका पौडेलले निकै प्रशंसनिक कामको थालनी गरेका छन् । सप्तरी जिल्लाको गोबरगाडा भन्ने गाँउमा दुईघण्टाभन्दा वढी मोटर डुङ्गा यात्रामार्फत पुगि त्यहाका बाढी पीडित जनतालाई राहत वितरण गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको भातृ सस्था नेपाली जनसम्पर्क समिति साउदी अरबले उपलब्ध गराएको एक थान ब्ल्याङ्केट, तन्दा र झुलसहित पुगेको पौडेल टोलीले तिनसयभन्दा बढी बाढी पिडितलाई वितरण गरेको छ । अत्यन्त विकट भएकाले गोबरगाडामा अहिले सम्म राहत लिएर कोही पनि पुग्न नसकेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । गोबरगाडामा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि केन्द्रिय स्तरको नेता प्रदिप पौडेलमात्र पुगेको भन्दै त्यहाका स्थानीयले धन्यवाद दिएका थिए । चारैतिर कोशीले घेरेको गोबरगाडालाई नेपालको श्रीलंका पनि भनिन्छ । सरकारी राहत विना अझै पनि २४ घण्टा बाढीकै त्रासमा रहेका गोबरगाडाबासीहरुले आफूहरुको समस्या राज्यलाई सुनाइदिन नेता पौडेल समक्ष आग्रह गरेका थिए । ज्यान नै जोखिममा राखेर आफूहरुलाई राहत वितरण गर्न आएकोमा उनीहरुले पौडेललाई धन्यवाद दिए । राहत तत्कालिन समस्याको समाधान भए पनि दिर्घकालिन समाधान भने नहुने पौडेलको तर्क छ । लोकपथ डटकम संग कुरा गर्दै नेता पौडेलले बाढी पीडितलाई सहयोगको शुरुवात ढिलै भएपनि अब यो अभियानका रुपमा अगाडी बढ्ने बताए । उनले थपे “ अब जनसम्पर्क समिति साउदीजस्तै अन्य सहयोगी हातहरुलाई साथमा लिएर हामी पुस माघसम्मपनि तराईका बाढीपिडित नागरिकहरुका लागि (जनतालाई न्यानो) अभियान निरन्तर रुपमा चलाउछौ ।”हेर्नुस तस्विरमा गोबरगाडाका नागरिक संग नेता पौडेल
बाइडेनको शपथका लागि चिटिक्कै पारियो क्यापिटल भवन (फोटोमा हेर्नुहोस्)
काठमाडौं । २० जनवरी अर्थात् भोलि अमेरिकामा नयाँ नेतृत्वले सत्ता सम्हाल्ने छ ।
नेपालको पासपोर्ट विश्वकै कम शक्तिशाली पासपोर्टहरुको सूचीमा, किन खस्कियो नेपालको साख ?
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीले हवाइ यात्राको नापनक्सा नै बदलिदिएको छ । एयरपोर्टमा
मन्दिरमा किन पालना गरिन्छ धार्मिक नियम ? विज्ञ भन्छन्, ‘विज्ञान पनि सहमत छ’
काठमाडौं । मान्छे जतिसुकै नास्तिक किन नहोस् तर, मठमन्दिरमा गएपछि एक किसिमको छुट्टै
तारुकाको गोरु जुधाइमा जे देखियो (फोटोफिचर)
काठमाडौं । यस वर्षपनि नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका-३ स्थित तारुकामा गोरु जुधाइएको छ ।
१८६१ को गृहयुद्धपछिकै सबैभन्दा धेरै डिभाइडेड अमेरिकाको सत्ता सम्हाल्दै बाइडेन
सप्तकोशीमा आकस्मिक सेवा शुरु
गरीबको पहुँचसम्म विद्युत विस्तार गर्न माग
लण्डनको ट्रेण्डिङ हल ‘द रिङ’ बन्द हुँदै
खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई कारबाही
महान दार्शनिक शुकरातका १६ जीवनोपयोगी भनाईहरु
यी व्यक्तिलाई पैसा तिरेर किन्न पाइन्छ !
ओली निरन्तर संविधान कुल्चिन सक्रिय
यसकारण बेलुकाको खाना चाँडै खानुहोस् !